ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၂)
ရန်ကုန်သွားမယ့် မောင်ပေ (၂)
Posted by မောင် ပေ on Dec 2, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 25 comments
ကားကွင်းရောက်ပြီး ၊ စီးရမည့်ကားပေါ်တွင် ထိုင်ပြီးနောက် ၊ ခေါင်းထဲဝင်လာသော အတွေးများကို နဲနဲပြောပြချင်ပါသည် ။
မကြာခင်က ဖြစ်ခဲ့သော တံတားဦးနားက ကားအက်စီးဒင့်အကြောင်း ဘဲ စိတ်ကူးထဲတွင် ပေါ်နေသည် ။ အခြားအကြောင်းအရာများကို ပြောင်းလဲ စိတ်ကူးပါသော်လည်း ၊ ထိုအကြောင်းချည်း ပြန်ပြန်ပေါ်လာသဖြင့် ၊ ကျွန်ုပ် ယုံကြည်သက်ဝင်ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓ ကို စိတ်တွင် ရှိခိုးပူဇော် အာရုံပြုကာ စိတ်ပုတီး ကို ထုတ်ပြီး ပုတီးစိပ်နေမိသည် ။
အမှန်အတိုင်း ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ် သည် ကြောက်တတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည် ။
ကားထွက်တော့ ဒရိုက်ဘာသုံးယောက်နှင့် စပယ်ယာ တစ်ယောက် ကို တွေ့ မှ စိတ်အေးသွားသည် ။ အလှည့်ကျ မောင်းကြမည် ဖြစ်သဖြင့် အေးဆေး ။
မိတ္ထီလာ ဖီးလ် စားသောက်ဆိုင်တွင် ခဏ ရပ်နားသည် ။ စားပွဲထိုးကောင်လေး ကို မေးကြည့်သောအခါ ၊ ၁၁၅ မိုင် ဖီးလ် စားသောက်ဆိုင်တွင် ထပ်မံ ရပ်ဦးမည် ဟု ပြောသဖြင့် အအေးတစ်ခွက်နှင့် ရေသန့် ဘူး တစ်ဘူး ကုန်အောင် သောက်ဖြစ်သည် ။
ထိုကြောင့် ဒုက္ခများရပါတော့သည် ။ ည၂နာရီခန့် တွင် ဆီးအလွန်သွားချင်လာသည် ။
ကားဒရိုက်ဘာ ကို မေးကြည့်တော့ ၊ ၁၁၅ မိုင် တွင် မရပ်တော့ ဟု ပြောသည် ။
ထပ်မံ အောင့်အီးနေကြည့်တော့လဲ ၊ လွန်စွာအေးလှသော ကားအဲကွန်းကြောင့် မည်သို့ မျှ နေမရတော့သည့်အဆုံး ၊ “ ကျန်းမာရေး ခဏရပ်ပေးပါခင်ဗျာ ” ဟု တောင်းဆိုရတော့သည် ။ လမ်းကျဉ်းတဲ့နေရာ ရောက်နေလို့ ၊ ခဏစောင့်ပါ ၊ လမ်းကျယ်တဲ့ နေရာရောက်တာနဲ့ ရပ်ပေးမည် ဟု ပြောသည် ။
ကားရပ်သည်နှင့် ၊ ကျွန်ုပ်လည်း ဝမ်းသာအားရ ဇွတ်ဆင်းပြေးမည် အလုပ် ၊ စပယ်ယာနှင့် ဒရိုက်ဘာတို့ မှ အလန့် တကြား နှင့် ကျွန်ုပ်လက်ကိုဆွဲကာ တားမြစ်ကြတော့သည် ။
အကြောင်းမှာ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ကားအနောက်ဘက် မှ ကားတစ်စီး၏ မီးရောင်ကို လှမ်းမြင်နေရသောကြောင့် ။
“ ကားဆရာရယ် ၊ အဝေးကြီးရှိပါသေးတယ် ” ဟု စောဒကတက်လိုက်သောအခါ ၊ ပြီးခဲ့သော ည က ရန်ကုန်-မန်းတလေး မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၀၀ တွင် ဖြစ်ခဲ့သော အက်စီးဒင့် အကြောင်း ကို သိလိုက်ရသည် ။
အဲဒီညက ကားလိုင်းနာမည်မသိ ၊ ကားမှ ၊ ခရီးသည် တစ်ဦးသည် ၊ ယခုကဲ့သို့ ၊ ကျန်းမာရေး အပေါ့သွားဖို့ ၊ ခဏရပ်လိုက်ချိန်တွင် ၊ နောက်မှ ကားအလာ ကို မကြည့်ဘဲ ၊ ကားပေါ်မှ ကမန်းကတန်း ဆင်းပြီး ၊ ကားလမ်းမပေါ်အရောက် ၊ အနောက်မှ မောင်းလာသော အိပ်ပက်လက် ကားမှ ဝင်ကျုံးရာ ပွဲချင်းပြီးလေ ဟူသတည်း ။
အဆိုပါကားလိုင်းမှာ ရှိသမျှ ကားလိုင်းများအားလုံးထဲတွင် မောင်းတာ အမြန်ဆုံးဟုလည်း သိရသည် ။
ရန်ကုန်-မန်းတလေး အမြန်လမ်းမကြီးဘေးတွင် တွေ့ မြင်ခဲ့ရသော သတိပေး၊အချက်ပြ ဆိုင်းဘုတ်များမှာ
ပထမဆိုင်းဘုတ် “ တစ်နာရီ မိုင်၆၀ထက် ပိုမောင်းလျှင် အသက်အန္တရာယ် ရှိသည် ”
ဒုတိယဆိုင်းဘုတ် “ 100km/hr ”
ပထမ ဆိုင်းဘုတ် ပြန်လာ၏ ဒုတိယ ဆိုင်းဘုတ် ပြန်လာ၏ ပထမ ၊ ဒုတိယ
ိစိတ်ဝင်တစ်စားဖြင့် ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခု သေချာ မျက်လုံးပြူးကြည့်ရင်း တစ်ရေး အိပ်ပျော်ခဲ့ရသည် ။
၅နာရီခန့် နိုးတော့ ၊ လမ်းဘေးကြည့်မိသည် ။ ရန်ကုန်သို့ ဝင်လာပြီ ။ ၅နာရီ ၅၀ တွင် အောင်မင်္ဂလာ ကားကွင်းသို့ ရောက်သည် ။
ထုံးစံအတိုင်း ကားတစ်စီးဆိုက်သည် နှင့် တက္ကစီဆရာများ ဝိုင်းအုံလာကြသည် ။
အရင်ခေါက်တွေ ရောက်တုန်းကလိုတော့ သိပ်မဆိုးတော့ ။
ကျောပိုးအိတ်နှင့် စာအုပ်လက်ဆောင်ထုပ်များ ဆွဲပြီး ဆင်းလာတော့ ၊ တက္ကစီ ဆရာများ ကပ်လာပြီး ဘယ်သွားမလဲ မေးသည် ။
ကျွန်ုပ်လည်း ခေါင်းယမ်းခါပြပြီး ၊ သတို့ သား ဆီဖုန်း အရင်ဆက်တော့ ၊ ကျွန်ုပ် တည်းခိုဖို့ ရန် ဟိုတယ်နာမည် လိပ်စာ ပြောပြသည် ။
ထိုအခါ မှ ၊ ကားငှားရန် ၊ ကားများကိုလိုက်ကြည့်နေချိန် ၊ ရုတ်တရက် ကျွန်ုပ် ပခုံးကို လက်တစ်ဖက် လာကိုင်သဖြင့် ၊ ဘတ်ကနဲ လှည့်အကြည့် ၊ ပြုံးပြနေသော ၊ အရပ် ငါးပေခြောက်လက်မ ခန့် ရှိ ၊ ရှမ်းကုလားလိုလို ရုပ်နှင့် လူတစ်ယောက် ကို တွေ့ လိုက်ရသည် ။ အသိများလား လို့ သေချာကြည့်တော့ အသိလည်း မဟုတ် ။
ကျွန်ုပ်လည်း စိတ်ပေါက်သွားပြီး “ ဘာကိစ္စနဲ့ ငါ့ပခုံးကို ကိုင်ရတာလဲ ကွ ” မေးလိုက်တော့ မချိပြုံးလေး ပြုံးပြရင်း
“ အကို…ကားငှားဦးမလားလို့ မေးချင်လို့ ပါ ”
“ မင်းကားက ဘာကားလဲ ၊ နောက်ပြီး ငါက တစ်ယောက်ထဲ သွားချင်တာနော် ၊ တစ်ခြား ခရီးသည်တွေ နဲ့ ဆိုရင် မလိုက်ဘူး ”
“ အကို တစ်ယောက်ထဲ ကို ပဲ တင်မှာပါ ခင်ဗျာ ၊ ကျုပ် စောန ကတဲ က အကို့ ကို လှမ်းကြည့်နေတာပါ ၊ အကို ဖုန်းပြောတာ ပြီးမှ ကျုပ် လာမေးကြည့်တာပါ ၊ ဘယ်ကို သွားမလဲ ”
“ ပုဇွန်တောင်က ဒီဟော်တယ် ကို သွားမယ်ကွာ ၊ ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ ”
“ အကိုက ဈေးဦးပေါက် ဘဲ ၊ ကြည့်ပေးလိုက်ပါ ”
“ ဟေ့ရောင်..ဘာမှ ကြည့်ပေးလာလုပ်မနေနဲ့ ၊ ဈေးတစ်ခါထဲပြော ၊ ကြိုက်ရင်ငှားမယ် ၊ များရင် လစ်ပဲ ”
“ ၅ထောင်ဆို အဆင်ပြေမလား အကို ”
ကျွန်ုပ် မိတ်ဆွေ ကိုဘီလူး က ကားငှားလျှင် လေးထောင်ကျပ်ခန့် ထက် ပိုမပေးရဟု ပြောထားသည် ။ ယခု သည်ငတိ က ငါးထောင်ဆိုတော့ ၊ တစ်ထောင်လောက်နဲ့ တော့ ထပ်ဆစ်မနေတော့ပါဘူးလေ ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ
“ အေး..မင်းကားကရော ကောင်းရဲ့ လား ၊ ကားစုတ်ရင်လဲ မငှားဘူးနော် ”
“ ကဲဗျာ..ပေးပေး..အကို့ အထုတ်တွေ ၊ အားလုံးအဆင်ပြေပြီသာမှတ် ၊ စိတ်တိုင်းကျ စေရမယ် ”
သို့ ဖြင့် ၊ ကျွန်ုပ် နှင့် ထိုငတိ ကားဆီသို့ လျှောက်ခဲ့ကြသည် ။
ထိုငတိ ကားက မဆိုး ၊ မိတ်အင်ဂျပန် ကော်ရိုလာ လေး ။ နဲနဲဟောင်းနေတာ တစ်ခုဘဲရှိသည် ။
ကားအနောက်ခန်း မှ တက်မည်လုပ်တော့ ၊ ရှေ့ ခန်းတွင် ဇွတ်ထိုင်ခိုင်းသည် ။ အထုပ်များကို အနောက်မှာ ထည့်လိုက်သည် ။
ကားကွင်းမှ စတင်ထွက်လာတော့ ၊ ၆နာရီကျော်ပြီ ။
တစ်လမ်းလုံး များလိုက်သည့် စကား ။ ကျွန်ုပ်မှာ ခရီးပန်းလာသဖြင့် စကားကို မပြောချင် ။
အလိုက်ကန်းဆိုး မသိသော ငတိ က တော်ကီတရစပ် လွှတ်သည် ။ ဘယ်ကလာလဲ ၊ စာအုပ် ထုပ်တွေ တွေ့ တယ် ၊ စာရေးဆရာလား ၊ ကလောင်နာမည် ဘာလဲ ၊ ဟော်တယ်မှာ တည်းမှာ ဆိုတော့ စာရေးဆရာ ဘောစိ ဘဲ ၊ ဘာညာ အစရှိသဖြင့် ။
ကျွန်ုပ် မှာ လည်း စာရေးဆရာ မဟုတ်ရကြောင်း ၊ ဒါဘဲကွာ ဟု ဖြေရင်း စကားဖြတ်ရသည် ။ ငတိ က ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်သို့ ၊ ခရီးသည် အလာများကြောင်း ၊ ဟိုတယ် မရလျှင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဟု ဆက်မေးလာသည် ။ ငါ့ဘာသာ ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ကွာ ဟု ကြိမ်းလိုက်မှ အမေးရပ်သွားတော့သည် ။
ဟော်တယ်လ် ကို ရောက်တော့ ၊ ငတိ ပြောစကားကြောင့် ၊ ခဏနေဦးဟု ဆိုကာ ၊ ကျောပိုးအိတ်ကို လွယ်ပြီး ၊ ဟိုတယ်ထဲသို့ အခန်းကျန်သေးလား အရင်ဝင်မေးလိုက်သည် ။
အဲဒီမှာ ကျွန်ုပ် အမှားကြီး မှားသွားမှန်း ပြီးမှ သိလိုက်ရသည် ။ ဟိုတယ် ရီဆက်ရှင်း တွင် အခန်းရမရ ဝင်မေးတော့ အခန်းရသည် တဲ့ ။ ဒါနဲ့ စိတ်အေးသွားပြီး ၊ အပြင်ပြန်ထွက်တော့ ၊ ငတိကားရော လူပါ မရှိတော့ ၊ ဟိုတယ်အပြင် က ဝန်ထမ်းတွေ ကို မေးတော့ ၊ ကျွန်ုပ် ဟိုတယ် ထဲ အဝင် ၊ သူက မောင်းထွက်သွားသည် တဲ့ ။
“ သွားပြီ ၊ ရန်ကုန်က မိတ်ဆွေတွေအတွက် လက်ဆောင်ပေးဖို့ ယူလာသော စာအုပ်များမှာ ၊ ငတိကားပေါ်တွင် ပါသွားချေပြီ ”
ဇါတ်သိမ်းပိုင်းကို ဆက်တင်ပါမည် ။
—— ကျွန်ုပ်၏ အရည်မရ အဖတ်မရ ခရီးသွားမှတ်တမ်း ကို သည်းခံ ဖတ်ပေးသည့် အတွက် အထူးဘဲ လေးစားကျေးဇူးတင်ပါသည် ——
ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ ဟယ်.. စာအုပ်တွေ နှမြောစရာကြီး ..
သတိလေး တချက်လွတ်သွားတာကိုး.. တကူးတက သယ်လာပြီးမှ … အဲ့ဒါ မောင်ပေ့မိန်းမ မပါလို့ သူပါရင် ဒီလိုဖြစ်မှာ မဟုတ်ဖူး…
အခု ရန်ကုန်-မန်း အဝေးပြေးကားစီးရမှာ တောင် နည်းနည်းလန့်နေပြီ …
အင်းနော် .. လမ်းလျှောက်သွားလို့လဲ မဖြစ်နိုင်တော့ .. မစီးရဲပေမဲ့ စီးနေကြရတယ်….။
ဖြစ်ခဲပေမဲ့ ကိုယ်စီးတဲ့ကား အက်ဆီးဒင့် မဖြစ်စေဖို့ ဆုတောင်းရတာ အမော….။
ရမိရရာ ဘုရားစာတွေလဲ အသဲအသန်ရွတ်ရနဲ့….။
အပြန်ကြရင်တော့ မိန်းမရိုက်တာ ခံရတော့မှာပဲ … သနားလိုက်ထှာ …
ရိုက်မှာ ..နှာခေါင်းနဲ့ …ပါးကို ..လို့ …
P.S ဘော်ဒါအချင်းချင်း ချစ်ခင်သမှုနှင့်မန့်တာကို ဘာမှ မဆိုင်တဲ့
ဖေတစ်ဆယ် ရိုးမတားတွေ ပျော်ပျော်ရီး အနီကဒ်ပြနိုင်ပါကြောင်း…
အဲဒါတော့ပြောမနေနဲ့ တော့ .. ရိုက်ကလွန်းလို့ကပေ့ မိန်းမ နှာခေါင်းတိုဝင်နေပြီ။ ကပေတော့ ဘာတိုလည်းမသိဘူး နှာခေါင်းလို့ ထင်တာပဲ
အဲလို သူမိန်းမက အားရပါးရ ရိုက်တော့
ကိုပေ ပထမ သီးခံသေးတယ် ကြာတော့ မခံနိုင်တဲ့ အဆုံး ၊ သူ့မိန်းမ ပါးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်တာ ဘေးကမြင်ရတဲ့သူတောင် ရင်တုန် ပန်းတုန် ဖြစ်ရတယ်
အဲဒီနှစ်က မန်းလေးမှာ တိုးပတ်ပုဝါတွေ ဈေးကြီးသေးတယ်လေ
ကားနံပါတ် မှတ်မိရင်တော့ တိုင်လို့ရတာပေါ့ဗျ။
ခုနက ကိုဘီလူးပို့စ်ကို ဖတ်ရတယ်။ အခုမောင်ပေပို့စ်ကို ဖတ်တယ်။ မမှီ မှန်းကြည့်မယ် ကားသမားက ကိုဘီလူးပဲ။
တခါမှ မဖတ်ဖူးတဲ့ လူထု တိုက်ထုတ် စာအုပ်တွေ အတွက် အမြန် ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ် ကပေ။
လူထု ဒေါ်အမာရဲ့မန်းလေးသူ မန်းလေးသား စာအုပ် ဖတ်ရတာ အလွန် အားရပါသဗျား ။
အကြင်ရာသီ ဘင်လာမီ တို့ရဲ့ အရှင် ………………………..ပါတဲ့။
ကိုရင့် ရန်ကုန်သွားတောလားက မလွယ်ပါလား။ဟူးးးးးး
.. Thank you လို့ အော်ပြောပေးသွားမယ်ထင်တယ်..။
မပေးပေးပေး ပေးပေးပေး ငါ့စာအုပ်တွေပြန်ပေးဆိုပြီး ပြေးလိုက်ပေါ့ ကိုပေရ ….
ဆိုင်မှားသွင်းတာမရလို့ စာအုပ်တွေ ပြန်လာပေးပါလိမ့်မယ်…မုန့်ဖိုးပေးဖို့ပြင်ထား..။
ကိုအောင်ရေ သာဓုမခေါ်သေးနဲ့ ဦးဗျ
ဇါတ်လမ်းက အခုမှ စတာ
ရွှေဘိုသားကိုများ လှမ်းအကြောင်းကြားပါတော့ ကိုပေရယ် အိမ်က မ၀ယ်ရသေးတဲ့ ကားနဲ့ လာကြိုမှာပေါ့
ကျနော်လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က တိုက်စီ ပေါ်မှာ ဖုန်းတစ်လုံးကျန်ခဲ့ဖူးတယ်။
ဟိုတယ်မှာ အခန်းယူပြီး အခန်းထဲ အရောက် ဖုန်းပါမလာတော့ ချက်ချင်းဘဲ ကျနော်ဖုန်းကို ဖုန်းနောက်တစ်လုံးနဲ့ လှမ်းဆက်လိုက်တယ်။
ဖုန်းလိုင်းက လိုင်းဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းမကိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ နောက်တစ်ခါ ထပ်ခေါ်တယ်။ လူကြီးမင်းနဲ့ တိုးတော့တာဘဲ …. ဖုန်းပိတ်ထားတယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ ဘာရမလဲ ကျနော်လဲ ဖုန်းပြန်ပေးရင် ၁ သိန်း ပေးမယ်ဆိုပြီး message ပို့လိုက်တယ်။ အဲဒီကျမှ ဖုန်းပြန်ခေါ်လာတယ်။ အချိန် နဲ့ နေရာ သေချာ ချိန်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျောက်မြောင်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ဆိုင် မှာပါ။ ကျနော်လဲ တစ်ယောက်တည်းမသွားရဲ တာနဲ့ ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကို အရေးတကြီး အကူအညီတောင်းပြီး ငွေ ၁ သိန်း နဲ့ ကိုယ့် ဖုန်းကိုယ် ပြန်သွားယူရတာပေါ့။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လဲ ရောက်ရော ဖုန်းလာပေးတာက ခပ်၀၀ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင် သမီးတစ်ယောက်နဲ့ နှစ်ယောက်လာပြီး ဖုန်းကိုပြန်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးကြီးက သူ့မှာ ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းလို့ ဆေးဖိုးနဲ့ ကလေး သုံးယောက် ကျောင်းစရိတ်နဲ့ စီးပွားရေးမပြေလည်ကြောင်း စပြီး ငြီးပြပါတယ်။ ပိုက်ဆံ ၁ သိန်းလဲ ထုတ်ပေးလိုက်ရော ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောတော့ဒါပဲ။ ငွေ ၁ သိန်း ပေးလိုက်ရလို့ စိတ်ထဲ မှာ ဘယ်လဲ ကြိမ်ဆဲ နေလဲ ဆိုတာ အဲဒီ ဘွားတော် သိမယ်မထင်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ဆိုတော့ ၊ ဖုန်းဈေးတွေ ၂၃ သိန်း ၂၅ သိန်း ပတ်ချာလည် မှာ ရှိတုန်းကပေါ့
ဟန်းဆက်ဖိုးကလဲ အဲ့တုန်းက ဈေးက ၂သိန်းကျော်တွေ ဆိုတော့
လှူခဲ့တယ်လို့ ဘဲ သဘောထားလိုက်ပါဗျာ ။
မဟုတ်လဲ ပိုက်ဆံမပေးရင် ပြန်ပေးမှာမှ မဟုတ်တာဘဲ ။ နော
အဲဒီတုန်းက ဟန်းဆက်က N86 nokia လေ ပေါ်ခါစ ဆိုတော့ ဟဲဟဲ ဖုန်းဖိုးက ၅ သိန်းဝန်းကျင်
ဖုန်း အပျောက် လျှောက်ရင် ၁ သိန်း နဲ့ ၄ သောင်းလောက် ကျမှာ။ နောက် ပြီး ဖုန်းကဒ်အသစ်ပြန်ရဖို့ အမြန်ဆံုးဆိုရင်တောင် ၁ ပါတ်လောက် စောင့်ရဦးမယ်။ အဲဒါကြောင့် ၁ သိန်းနဲ့ လဲ လိုက်ရ ပေါ့…..
မှတ်မှတ် ရရ ရှိလှတဲ့ အမှတ်တရ ပေါ့။
ကျနော်ရဲ့ဘယ်လောက်ပေးမလဲ မေးခွန်းကို အခုဖြေလိုက်ပါပြိ။
လိုက်ရှာပေးတဲ့ကောင်လေးကို တစ်သောင်း ပေါင်း လေးသောင်းပေးလိုက်ပါကြောင်း။
တော်တော်ကြာနေရောပေါ့ဗျာ ကိုပေါက် အဖြေပေးတာကလဲ
မိန်းကလေး တစ်ယောက် ရဲ့ အဖြေသာ ဒီလို စောင့်ရရင်ဖြင့်
ကားဂိတ်မှာ ကခင်ရွှေ့ ကို ကြိုခိုင်းလိုက်ပါ့မယ်လို့ ပြောတာ..လက်မခံဘူး.
ကားသမားက ကမှော်ချာ ပဲဖစ်ရမယ်
စာအုပ်ထုပ်လေးပဲ မသွားတာ တော်သေးတာပေါ့ ရဲဘော်ကြီးရယ်……